Gobolka Ogaden oo laga helaya Ceelal Shidaal - iftineducation.com
Gobolka Ogaden oo laga helaya Ceelal Shidaal
aadan21 / March 22, 2010
Jig-Jiga -Shirkad laga lee yahay dalka Canada ayaa waxay waddaa sahmin Saliida adag iyo qayraadka dabiiciiga ah ee ka buuxa gobolka lagu magacaabo Kilinka shanaad, ee dhulka ismaamulka Soomaalida, ee dalka Ethiopia.
Shirkadaasi ayaa shaacisay in ay ka heshay gobolka Ogaden labad fadhi oo saliida adag ah, balse horaantii waxaa sidoo kale Shirkad laga lee yahay dalka Sweden oo lagu magacaabo Lundin Oil horay u sahmiyey dhadhiyo badan oo ay ka buuxaan salida iyo qayraadka dabiiciga taasi oo lagu qiyaaasay ilaa in kabadan 25, 000 Sq.m,
Shirkada Lundin ayaa sidoo kale waxa ay shaacishay in Bariga Afrika ay ka buuxaan fadhiyo badan oo shidaal ah sida, Ethiopia, Kenya iyo Puntland.
Dadka u kuur gala qayraadka dabiciga iyo shirkada shidaalka ayaa rumeysan in Bariga Afrika ay tahay nawaaxiga xiga ee caalamka diirada u saaran tahay kuwasi oo dhawanahaan laga helaayo ilo shidaal, Albert Basin ee Uganda ee Saliida Tullow taasi oo rajo weyn ku dhaliyey in Bariga afrika loo kuur galo.
Gobolka Ogaadeniya ayaa la rumeysan yahay in ay ka buuxaan shidaal ka badan mida ku jira Bariga dhexe.
Shirkado ajanibi ah ee qoda saliida dabiiciga ah ayaa dhowr jeer o horay u kuu garlay sahmiyeyna gobolka Ogaden ilaa sanadkiii 1950kii, taasi ay haanani la sugaayo in laga dilaacsho cilaashaaasi.
Mohammed Ibrahim ‘Saalaxeey’
Murtadad Ayaan Xirsi oo qortay buug ay ku aflagaadeyneyso Nabi Muxammed NNKH
Wiil iyo Aabihiis ku kulmay facebook-ga 37 sano kadib